‘यी ‘टेक्निक’ अपनाए संक्रमण हुनेको संख्या न्यून हुँदै जानेछ’ – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/‘यी ‘टेक्निक’ अपनाए संक्रमण हुनेको संख्या न्यून हुँदै जानेछ’
काठमाडौं – जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे बाहिरी देशमा जस्तो नेपालमा यस संक्रमणको असर धेरै नरहेको बताउँछन् । हालै उनले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा यस भाइरसबाट मृत्युदर ०. ४ प्रतिशत छ । ‘यी ८ जना मृतकको इतिवृत्ति राम्रोसँग केलाउने हो भने ‘ डेथ फ्रम कोभिड १९ ‘ को संख्या खासै छैन’ भन्छन् डाक्टर पाण्डे । उनका अनुसार यी केस ‘ डेथ विथ कोरोना भाइरस हुन् ।
यस्ता छन् कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित धारणा
– अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण जोखिम बर्गमा देखिएको छैन नेपालमा २० बर्षदेखि ५० बर्ष उमेरका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
यी मध्ये ९० % भन्दा धेरै संक्रमितमा कोभिड १९ को लक्षण देखिएको छैन। सक्रिय उमेरका व्यक्ति भारत लगायत देशमा काम गर्न जाने, पढ्न जाने वा अन्य ब्यबसाय गर्न जाने भएकोले त्यहि बर्गमा संक्रमण धेरै देखिएको छ । यो उमेरका व्यक्तिमा दीर्घरोग कम हुन्छ । तसर्थ भन्न सकिन्छ, नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण धेरै जनाको मृत्यु हुँदैन ।
– भारत लगायत अन्य देशमा काम गर्ने १० लाखभन्दा धेरै नेपाली स्वदेश आउनको लागि प्रतिक्षारत छन् । तसर्थ केहि महिना संक्रमितको संख्या बढ्दै जानेछ । राज्यले ठूलो क्षमताका सुबिधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन केन्द्रको प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ। नेपाल भित्रिने पहिलो नाकाबाट सिधै क्वारेन्टाइनमा २ हप्ता राख्ने तथा त्यसपछि परिक्षण गरेर आफ्नो थातथलोमा पठाउने हो भने संक्रमितको संख्या त्यति धेरै बढ्ने छै। तर राज्य अहिलेजस्तो योजनाविहीन बनिरह्यो भने यसले ठूलो क्षति गराउनेतर्फ हामी सचेत हुनु आबश्यक छ।
– भारत तथा अन्य देशबाट आइरहेको तथा आउने नागरिक मध्ये ९० % गाउँमा जाने अवस्था छ । गाउँमा घरको दुरी टाढा हुने, को कहाँबाट कहिले आएको बारे थाहा हुने तथा क्वारेन्टाइनमा नबसि खुला हिंड्न नपाइने स्थिति भएको हुँदा ‘ स्थानीय संक्रमण ’ कम हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । सहरमा जस्तो द्रुत गतिले गाउँमा रोग सर्ने भीडभाड हुँदैन ।
– अधिकांश संक्रमित लक्षणविहिन भएको हुँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने सम्भावना थोरै हुन्छ। छोंटो समयको सामान्य बोलचालमा संक्रमण सर्दैन । अधिकांश लक्षणविहिनलाई खोकी, हाच्छ्युं, घ्यारघ्यार नहुने भएकोले भाइरस सर्नको लागि पर्याप्त लोड पुग्दैन ।
– नेपाल आइपुग्दा संक्रमितको रोग सार्न सक्ने अबधि ११ दिन कट्ने भएकोले टेस्ट पोजिटिभ देखिएपनि अन्य व्यक्तिलाई रोग सर्दैन ।
– नेपालमा जनवरी तथा फेब्रुअरीमा कोरोना संक्रमणको पहिलो वेभ आइसकेको बिभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्न सकिन्छ । केहि जनसंख्या पहिलो वेभले इम्युन भएका छन् । तसर्थ र्यापिड टेस्टमा हजारौंको एन्टिबोडी पोजिटिभ देखिएको छ । यो दोस्रो वेभले पनि जनसंख्याको केहि हिस्सालाई इम्युन बनाउने छ। यसै गरेर समाज क्रमशः इम्युन हुँदै जानेछ ।
– सामाजिक दुरी, मास्कको प्रयोग, सरसफाई, घरमा बस्ने बानी आदिले गर्दा सिधै संक्रमण हुनेको संख्या न्युनतम हुनेछ ।
– रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन गुर्जो, बेसार, अमला, कागती, भिटामिन सि, भिटामिन डी खाने, घाम ताप्ने, ब्यायाम गर्ने, योग तथा ध्यान गर्ने लगायतका अभ्यास जीवनशैली हुन लागेका छन् ।
*यसैबीच यसअघि उनले कोरोना ब्यबस्थापनका ब्यबहारिक पाटा विषयमा ‘नोट’ लेख्दै सरकार गम्भिर हुनुपर्ने विभिन्न पाटाहरुबारे मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेका थिए ।
– राज्यले आफ्ना नागरिकलाई बिचल्लीमा पार्नु हुँदैन ।भारत, अरब वा अन्य देशबाट नेपाल फर्किने बाध्यता भएका नागरिकलाई उद्दार गर्नुपर्छ।उहाँहरुको ठाउँमा आफुलाई राखेर निर्णय गर्नुपर्दछ । यो महामारीको बेला हामी संगै बाँच्ने, संगै मर्ने उदार मानसिकता चाहिन्छ ।
– भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली आइरहेका छन् । उनीहरुलाई सबैलाई परिक्षण गर्ने क्षमता सरकार संग नहुन सक्छ । त्यस्तै उडान सुरु भएपछि अरब लगायतका देशबाट लाखौँ नेपाली आउने सम्भावना छ । सरकारको परिक्षण क्षमता कम भएमा लक्षण देखिएकालाई मात्र परिक्षण गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यी दुवै अवस्थामा सेना र प्रहरी अस्पतालले पनि आफ्नो जनशक्ति र औषधि उपकरण प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
– सरकारले क्वारेन्टाइनको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसको लागि उनीहरुको क्षमता अनुरुपका होटेल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, सामाजिक भवन आदिमा राख्नको लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ, न्युनतम शुल्कको ब्यबस्था गर्नुपर्छ । यसले एकातर्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई बिजुली, पानी, इन्टरनेट, सौचालय, सामाजिक दुरी आदिको एकै ठाउमा ब्यबस्था हुन्छ भने अर्कोतर्फ बन्द भएका होटेललाई संचालन खर्च उठ्न सक्छ ।
– कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा जनतालाई ब्यापक सुचित गरेर होम क्वारेन्टाइनलाई प्रश्रय दिनुपर्ने हुन्छ । यसको अनुगमन स्थानीय निकाय र सुरक्षाकर्मीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– कोरोना संक्रमण धेरै नागरिकमा फैलियो भने अस्पतालमा राख्नको लागि वेडको अभाव हुन्छ। कोरोना पोजिटिभ देखिंदैमा अस्पतालमा राख्नै पर्छ भन्ने छैन । नियमपूर्वक आइसोलेसनमा बस्ने बाताबरण भएमा आफ्नो घर नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ।
संक्रमितको मनोबल बढ्ने, परिवारको माया पाउने, खाना समयमा र आफुले चाहेजस्तो हुने तथा घरमै हुँदा मानसिक रुपमा बिरामी भएको अनुभव नहुने हुँदा घरमा आइसोलेसनमा बस्ने तथा गाह्रो भएमा मात्र अस्पताल जानुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनु आबश्यक हुनेछ ।
– घरमा स्पेस थोरै भएमा नजिकको होटेल, गेस्ट हाउस वा रिसोर्टमा राख्न सकिन्छ।
– कोरोना संक्रमण भएका मध्ये ८५ % लाई सामान्य लक्षण देखिएर आफै निको हुने भएकोले यो वर्गलाई अस्पताल आबश्यक पर्दैन । ८५ % संक्रमितलाई घर, होटेल, रिसोर्ट, लज आदिमा राख्दा अस्पतालको लोड कम हुन्छ | जसले गर्दा बाँकी १५ % लाई राम्रो उपचार हुन्छ। अन्य बिरामीलाई पनि सेवा लिन सजिलो हुन्छ | ७-८ % लाई आबश्यक पर्न सक्ने आइसीयु, भेन्टिलेटर आदिको क्षमता बढाउन अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ । अस्पतालको जनशक्ति अरु बिरामीको उपचारमा फोकस हुन पाउँछ ।
– कोरोना संक्रमण छिट्टै नहराउने भएकोले जनतालाई कोरोनासंग कसरी काम गर्ने ? भन्ने बारे गाइडलाइन बनाउनु आबश्यक छ ।
– धनी व्यक्तिलाई सित्तैमा परीक्षण र उपचार उपलब्ध गराउनु पर्दैन। उनीहरुलाई ‘ पेइंग काउन्टर ‘ मा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्ने, अस्पतालमा शुल्क तिरेर उपचार गराउने, स्टार होटेलमा क्वारेन्टाइन / आइसोलेसनमा राख्ने ब्यबस्था मिलाउन सकिन्छ ।
– नेपालसंग परीक्षण किटको अभाव हुँदैछ । यथाशीघ्र किटको ब्यबस्था गरेर पहुँचवालालाई होइन, जोखिम बर्गलाई परीक्षण गर्नुपर्दछ । हामीले बुझ्नुपर्दछ कि आज PCR नेगेटिभ देखिए पनि भोलि संक्रमण सर्न सक्दछ। तसर्थ सुरक्षित अभ्यास नै समाधान हो ।
उनले लेखेका थिए :
नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो वेब जनवरी र फेब्रुअरीमा आएको मेरो निस्कर्ष छ । त्यो बेला काठमाडौं लगायत देशभर निकै कडा खालको रुघाखोकी तथा ज्वरो फैलिएको थियो । उक्त समयमा उच्च ज्वरोको कारण केहि व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार हामीले पढेका थियौं । यसलाई पुष्टि गर्ने केहि आधार छन् ।
४. फाल्गुन तथा चैत्रमा संसारभर कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिंदा नेपालमा अत्यन्तै न्यून केस देखिएका थिए । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने नेपालको केहि जनसंख्या कोरोना संक्रमण बिरुद्ध इम्युन भएको हुनसक्छ । बैशाखसम्म एकजना बिरामी पनि आइसीयु तथा भेन्टिलेटरमा बस्नु परेको थिएन | त्यस्तै कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन ।
५. नेपालका अधिकांश ठाउँमा र्यापिड टेस्ट पोजिटिभ भएका व्यक्तिलाई PCR टेस्ट गर्दा नेगेटिभ देखिएको छ | र्यापिड टेस्टमा ३० देखि ६० प्रतिशत फल्स रिपोर्ट आउँछ, १०० % फल्स रिपोर्ट आउंदैन । र्यापिड टेस्ट पोजिटिभ तथा PCR टेस्ट नेगेटिभको अर्थ के हुन्छ भने अहिले सक्रिय संक्रमण छैन तर पहिले संक्रमण भएर शरीरमा एन्टिबोडी बिकास भएको छ ।
७. गुल्मीको मदाने गाउँपालिका शिक्षकलाई जन्डिस तथा निमोनियाको संकेत भनेर स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्दा निको भएन । उनलाई बुटवल रिफर गरियो । बुटवलको क्रिम्सन अस्पतालमा ल्याउँदा उनलाई सास फेर्न निकै गाह्रो भएको थियो। त्यसैले भेन्टिलेटरमा राखियो ।उनको कोरोना टेस्ट पोजिटिभ देखियो । उनको ट्राभल हिस्ट्री छैन। गाउँमा कसैलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थिएन । यो किसिमका केस अधिराज्यभर फाट्टफुट्ट देखिएका छन् । यसको अर्थ के हुन्छ भने नेपालका बिभिन्न गाउँमा कोरोना संक्रमणको अवशेष अहिले पनि छ।
अप्रिल र मे मा नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो वेभ आएको छ । यो वेभ खास गरेर भारतबाट आएका नेपाली र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुमा ब्यापक मात्रामा देखिएको छ ।परिक्षणको दायरा निकै साँगुरो भएकोले यो वेभको क्षेत्रफल अध्ययन हुन सकेको छैन | अहिले भारतसंग जोडिएका सिमाना, त्यहाँबाट बिभिन्न गाउँ तथा सहरमा पुगेका व्यक्ति र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति, क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिमा धरै देखिएको छ | संक्रमण फैलिएको इन्डिकेटर बताउने समुह जस्तै डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, संचारकर्मी, बालबालिका तथा सक्रिय उमेरका व्यक्तिमा बिभिन्न ठाउँमा छरिएर देखिएको छ। यो वेभ साउनसम्म तीब्र गतिमा फैलिने देखिन्छ । रोकथामका उपायलाई गम्भीर रुपमा परिचालन नगर्ने हो भने साउन मसान्तसम्म नेपालमा २४ हजार व्यक्ति संक्रमित हुने मेरो निस्कर्ष छ । यसको १५ % अर्थात ३६०० जनालाई अस्पतालको सेवा आबश्यक पर्न सक्छ भने १२०० जनालाई आइसीयु / भेन्टिलेटर आबश्यक हुनसक्छ । गुणस्तरीय उपचार र तयारी नभएमा करिब ६०० जनाको मृत्यु हुनसक्छ। यो ग्यारेन्टी होइन, मेरो अध्ययन र विश्लेषण हो । राज्यले न्युनतम यो संख्याको उपचारको लागि र मृत्युदर घटाउन गम्भीर तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।